Iindaba - INgxelo yeMarike yeTshintsho yeHlabathi ngo-2022: IMarike elindeleke ukuba ifikelele kwi-220.4 yezigidigidi zeedola ngo-2026 kwi-CAGR ye-23.3% - Uqikelelo lweXesha elide ukuya ku-2031
Ingxelo yeMarike yeTransformer yeHlabathi ngo-2022: Imarike elindeleke ukuba ifikelele kwi-220.4 yezigidigidi zeedola ngo-2026 kwi-CAGR ye-23.3%-uQoqosho lweXesha elide ukuya ku-2031
I-DUBLIN, ngo-Meyi 20, i-2022-(i-BUSINESS WIRE)-ResearchAndMarkets.com yongeza "iNgxelo ye-Transformers Global Market Report 2022, ngoHlobo lweTransformer, Uhlobo kunye noMsebenzisi wokugqibela" ingxelo kwi-ResearchAndMarkets.com iminikelo.
Imarike yoguqulo lwehlabathi kulindeleke ukuba ikhule ukusuka kwi- $ 75.89 yeebhiliyoni zeedola ngo-2021 ukuya kwi-USD 95.51 yeebhiliyoni ngo-2022, ngesantya sokukhula ngonyaka (CAGR) se-25.9%. ye-23.3%.
Abadlali abaphambili kwimakethi ye-transformer yi-ABB, iNkampani yoMbane Jikelele, iSchneider Electric SA, iMitsubishi Electric Corporation, iSchneider Electric, iMitsubishi Electric Corporation, iToshiba Corporation, iSiemens, iSGB-SMIT kunye neHammond Power Solutions.
IisitshintshiImarike ibandakanya ukuthengiswa kwee-transformers kunye neenkonzo ezinxulumene nazo ezisetyenziselwa ukuveliswa kwamandla, ukuhanjiswa, kunye ne-specialty transformers.I-transformers idlulisela amandla ukusuka kwelinye isekethe ukuya kwelinye.Iinguqu zokwandisa okanye zinciphisa i-voltage kunye namanqanaba angoku, ukwandisa okanye ukunciphisa amaxabiso e-capacitor, ukuthintela ngoku ngqo ukusuka Ukudlula phakathi kweesekethe ezimbini kunye neesekethe ezizimeleyo.
Iintlobo eziphambili ze-transformers ziguquli zamandla kunyeii-transformers zokuhambisa.I-transformer yamandla luhlobo lwe-transformer esetyenziselwa ukuhambisa amandla ombane phakathi kwejenereyitha kunye nesekethe ephambili yokusabalalisa.Kwiinkqubo zokuhambisa amandla, ezi ziguquli zisetyenziselwa ukudibanisa i-voltage yokunyuka kunye nokuhla.Ingasetyenziswa njenge iiguquli ezikumgangatho ophantsi kunye neziguquli ezikumgangatho ophezulu wokusetyenziswa, indawo yokuhlala kunye nezorhwebo, abasebenzisi bokuphela kweshishini.
I-Asiya Pacific ngowona mmandla mkhulu kwimakethi ye-transformer ngo-2021. Intshona Yurophu yindawo yesibini ngobukhulu kwimakethi yenguqu.Imimandla equkunjelwe kule ngxelo ibandakanya iAsia Pacific, iNtshona Yurophu, iMpuma Yurophu, uMntla Melika, uMzantsi Melika, uMbindi Mpuma kunye Afrika.
Imigaqo-nkqubo karhulumente ethandwayo yokwandisa umbane iya kuba negalelo ekukhuleni kwemarike ye-transformer ngexesha lesimo sezulu. inyathelo, elijolise ekuboneleleni ngombane ofikelelekayo kuwo onke amazwe.
La manyathelo aya kwandisa imarike yeenguqu zamandla aphakathi kwixesha eliqikelelweyo.Ukukhula kwemfuno yeziguquli zamandla aphakathi, aphantsi kunye naphezulu, axhaswa ngamaphulo alungileyo karhulumente, kuya kuba nefuthe elihle ekukhuleni kwemarike yenguqu.
Ukungazinzi kwamaxabiso ezinto eziluhlaza yiyona nto iphambili ekuthinteleni imarike yokuvelisa i-transformer.Ukungazinzi kubangelwa ukuguquguquka kwamaxabiso ezinto eziphathekayo ezifana nentsimbi, ubhedu kunye ne-oyile ekrwada.Intsimbi kunye nobhedu zisetyenziselwa ukwenza iinguqu.
Ukunyuka kweerhafu kwizinto eziluhlaza ezifana nentsimbi kunye nobhedu ziye zandisa ukuguquguquka kwexabiso, ngaloo ndlela kuthintela ukukhula kweemarike zamandla aphakathi. I-% kunye ne-10%, ngokulandelanayo. Ukunyuka kwamaxabiso kukhokelele ekunyukeni kweendleko zokusebenza, ngokuthintela ukukhula kwemarike.
Imakethi ye-transformer ibheka kwii-transformers ezizimeleyo kunye nezizilawulayo ezizimeleyo.Ii-smart transformers zicwangciswe ngokuqhubekayo ukulawula amandla ombane kunye nokuhlala unxibelelana nabachaphazelekayo, ukubonelela ngolwazi kunye nengxelo malunga nomthombo wamandla.
Banikezela ngamandla achanekileyo afunekayo kwaye baphendule ngokuguquguquka ngenkqubo ebizwa ngokuba yi-voltage optimization.Babonelela ngomlinganiselo ofanelekileyo wombane wezixhobo zombane, ngaloo ndlela banciphisa kakhulu ukukhutshwa kwegesi ye-greenhouse kunye nokusetyenziswa kombane.Ngokomzekelo, kwi-2021, i-Hitachi ABB Power Grids isebenzisana nayo. IYunivesithi yaseNanyang Technological, eSingapore (NTU Singapore) kwiprojekthi yophuhliso lwegridi ekhokelwa ngurhulumente.
Le mibutho mibini iya kusebenzisana ukuqhubela phambili uphuhliso lweteknoloji ye-slid-state transformer (SST), ekhokelwa yi-Energy Research Institute kwaye ixhaswa yiNational Research Foundation yaseSingapore. Le projekthi iyinxalenye yenyathelo lokuqala le-Energy Grid 2.0 yaseSingapore, elijolise kuyo. ukubumba inkqubo yegridi yesizukulwana esilandelayo kunye nokuguqula ulawulo lwamandla ngokudibanisa imithombo yamandla emininzi ibe yinethiwekhi enye enobuchule esebenza ngakumbi, ezinzileyo kunye neyomelela.
6.1.I-Global Transformer Market, Uhlobo lweTransformer, iSegmentation yeMbali kunye neForecast, 2016-2021, 2021-2026F, 2031F, USD Billion
6.2.IMarike yeTshintsho yeHlabathi, uLwahlulo ngokoHlobo, iMbali kunye noQoqosho, i-2016-2021, 2021-2026F, 2031F, i-USD yebhiliyoni
6.3.IMarike yeTshintsho yeHlabathi, iSahlulo sabasebenzisi bokuphela, iMbali kunye noQoqosho, ngo-2016-2021, 2021-2026F, 2031F, iidola zebhiliyoni.
7.1.I-Global Transformer Market, ngokoMmandla, iMbali kunye ne-Forecast, 2016-2021, 2021-2026F, 2031F, USD Billion
7.2.IMarike yeTshintsho yeHlabathi, ngokweLizwe, iMbali kunye noQoqosho, 2016-2021, 2021-2026F, 2031F, USD Biliyoni
I-SINGAPORE (iReuters) - Amaxabiso e-oyile anweba inzuzo ngoLwesibili emva kokuba i-European Union yavuma ukunciphisa ukuthengiswa kweoli evela eRashiya, yongeza kwindlela yemarike eyayisele iqinile phakathi kweemfuno ezikhulayo ngaphambi kwexesha lokuqhuba ihlobo e-US naseYurophu.I-US West Texas Intermediate (WTI) ikamva elikrwada lalikwi-118.25 yeedola ngomphanda, ukunyuka kwe-3.18 yeedola ukusuka ngoLwesihlanu. ezona zohlwayo zinzima eMoscow ukusukela oko iHungary yahlasela iUkraine kwiinyanga ezintathu ezidlulileyo.
U-Bengen kutshanje uthe lo mgaqo, oye wasetyenziswa ukususela ngo-1990, kufuneka ukwazi ukubamba ngaphandle kokuba kukho "imeko enzima yokunyuka kwamaxabiso".
Amava okwenyaniso orhwebo lwehlabathi lwe-Saxo! Ukufikelela ngaphezu kwama-60 kwiimarike zehlabathi kunye norhwebo ngaphezu kweemveliso ezingama-40,000.
Isixhobo sokubopha intambo esithobekileyo, icandelo elingabizi kakhulu elidibanisa iintambo kunye, liye laba sisibetho esingalindelekanga kwishishini lemoto. Ukubonelela ngezixhobo zemoto kuye kwathintelwa yimfazwe yaseUkraine, ikhaya lemveliso yehlabathi enkulu, apho iintambo zokubopha iintambo ziveliswa amakhulu amawaka eemoto ezintsha nyaka ngamnye.Unikezelo oluqinileyo lunokukhawulezisa izicwangciso zezinye iinkampani zemoto ezishiyekileyo ukuba zifudukele kwisizukulwana esitsha sezixhobo zombane ezikhaphukhaphu, ezakhiwe ngomatshini ezilungiselelwe izithuthi zombane, ngokutsho kodliwanondlebe namashishini angaphezu kweshumi elinesibini. abadlali kunye neengcali.
(Reuters) - Amaxabiso eoyile anyuke ngaphezulu kwe-121 yeedola ngomphanda ngoMvulo, ebetha phezulu kwiinyanga ezimbini, njengoko iTshayina yanciphisa izithintelo ze-COVID-19 kwaye abarhwebi balindele ukuba iManyano yaseYurophu ekugqibeleni ifikelele kwisivumelwano sokuvala ukuthengiswa kweoyile yaseRussia. ephelelwa ngoLwesibini, ihlalise i-$ 2.24, okanye i-1.9%, kwi-$ 121.67 i-barrel. I-US West Texas Intermediate (WTI) i-crude futures yayinyuka i-$ 1.99, okanye i-1.7%, kwi-$ 117.06 umgqomo nge-18.03 GMT, ukwandisa inzuzo eqinile kwiveki ephelileyo.
Ndafunda malunga neetheyibhile zokubonelela kunye nemfuno, isivuno ngehektare nganye, uhlalutyo olusisiseko, uhlalutyo lobungakanani, kunye nohlalutyo lobuchwephesha.Ngeminyaka yoo-1970, ukunyuka kwamaxabiso kwakuqhutywa luthotho lwezothuso zokubonelela kunye nenkqubo yaseWashington yompu kunye nebhotolo. Amaxabiso e-oyile kunye nezinye izinto ezifana ubhedu lwenyuka, kodwa ngenxa yokwehla kwamandla emali, amaxabiso aguquka ngokukhawuleza kwaye ii-CEO zatshiswa.
Dibana neengcali zemethodology ezaziwayo kwihlabathi kwiisemina ezizayo kunye neengongoma eziphambili.Ndwendwela iwebhusayithi ukuze ufumane ulwazi oluthe kratya.
Imiba yokunyuka kwamaxabiso kunye ne-supply chain yenze isithunzi kwii-stocks zokuthengisa.Ungalokothi ukhumbule ukuba abantu basadinga ukutya nanjengoko amaxabiso enyuka, kwaye izabelo eziThagethi ziwile kwi-26.9% kwinyanga edlulileyo, ngelixa izabelo ze-Walmart ziye zawa kwi-16% ngexesha elifanayo. I-Walmart kunye neThagethi zinempembelelo kwikhonkco lokubonelela.
(Bloomberg) -I-Shanghai iya kuvumela ukuhamba ngokukhululekileyo kwabantu kwiindawo ezithathwa njengomngcipheko ophantsi kwi-Covid-19 ngaphakathi kwesixeko kwaye ivule iindlela kunye nezithuthi zikawonke-wonke ukuqala ngolwesiThathu, inyathelo elikhulu kwiinzame zayo zokuphakamisa ukuvalwa kweenyanga ezimbini. Ukunciphisa imivuzo njengeNgcaciso yokunyuka kwamaxabiso ezinto eziyenyukayo: iiMarike ezi-WrapNATO kufuneka zicinge kabini ngaphambi kokwamnkela iFinland kunye neSweden iBiden idibana noPowell ukuxoxa ngokunyuka kwamaxabiso kwezoQoqosho kwezona ndawo ziseMngciphekweni wokuBhabha umndilili woMngcipheko.
Ukulula kunye nokungafihlisi kwesicwangciso sotyalo-mali se-Oracle ye-Omaha kubangele i-57 yeminyaka eyi-avareji yembuyekezo ye-20.1%.
(Bloomberg) -Imveliso e-China ngoomatshini abathathu abakhulu baseJapan yehle ngamanani aphindwe kabini ngo-Epreli, igxininisa indlela ukuvalwa kwe-Shanghai yabavelisi abasebenza kumvelisi omkhulu weenqwelo moya.
Izabelo zaseAsia zaxutywa ngoLwesibini emva kweengxelo zokuba ukucotha kwicandelo lezemveliso laseTshayina kuyacotha njengoko izithintelo zokulwa nentsholongwane kumashishini ziye zancitshiswa eShanghai naseBeijing.
Ukhuphiswano lwaseYurophu lokubonelela ngegesi yaseRashiya lusongela izicwangciso zeendawo ezintlanu zokungenisa igesi e-Australia njengoko zikhuphisana kwiziseko ezingundoqo ezibalulekileyo, oko kuphakamisa umngcipheko wokunqongophala kobonelelo kwi-Australia enabantu abaninzi kumzantsi-mpuma kule minyaka mibini izayo.Amazwe afana neFransi, iJamani ne-Netherlands ziya Isidingo sokungenisa irhasi yendalo engamanzi (LNG) ukuze ithathe indawo yerhasi yombhobho evela eRashiya, eye yavunywa ngexesha longquzulwano eUkraine. igumbi le-Australia lokungenisa iiprojekthi ezijolise ekuvaleni umsantsa olindelekileyo wokubonelela ngegesi ukusuka ngo-2024.
BENGALURU (Reuters) – umenzi weemoto waseIndiya iTata Motors Ltd utyikitye isivumelwano sokufumana umzi-mveliso weFord Motor Co. kwintshona yeGujarat njengoko ijonge ukunyusa imveliso yemoto yombane. Umnini weJaguar Land Rover uye walawula eIndiya. Imarike yezithuthi zombane ezisaqalayo, urhulumente azama ukuyikhulisa ngokunika iinkampani iibhiliyoni zeerandi kwinkuthazo.UTata uthe uza kutyala imali koomatshini abatsha kunye nezixhobo kumzi-mveliso ngokusebenzisa icandelo lezithuthi zombane, kwaye ulindele ukuba umzi-mveliso ube namandla okuvelisa. Iiyunithi ezingama-300,000 ngonyaka xa imisebenzi igqityiwe.
(Bloomberg) -I-Brent inyuke ngaphezulu kwe-120 yeedola njengoko i-China yanciphisa ukuvalwa kwe-anti-virus kwaye i-European Union yaqulunqa isicwangciso sokuthintela ukungeniswa kwe-Russian crude. ukudibana noPowell ukuxoxa ngefuthe lokunyuka kwamaxabiso kuqoqosho lwehlabathi iindawo eziyingozi kakhulu ukubhabha nge-avareji Intlekele kanye ngonyaka iinkokeli ze-EU zichasa ukuvalwa kweoyile eninzi yaseRussia ngenxa yemfazwe kaPutin I-oyile yonyuka nge-1.9% ukuya
I-TOKYO (Reuters) -Imveliso yefektri yaseJapan yehle kakhulu ngo-Epreli njengoko ukuvalwa kwe-COVID-19 yase-China kunye nokuphazamiseka okubanzi konikezelo kwabetha abavelisi nzima, kufiphaza umbono woqoqosho oluxhomekeke kurhwebo. Njengoko abathengi baye banyusa inkcitho emva kokuba oorhulumente behlisele amanyathelo okuqulatha ubhubhane, ukumelana noxinzelelo lokunyuka kwamaxabiso abanzi anokwenzakalisa imfuno. Imveliso yefektri yehle nge-1.3 yeepesenti ngo-Epreli ukusuka kwinyanga engaphambili, idatha esemthethweni ibonise ngoLwesibini, njengemveliso yezinto ezifana nezixhobo ze-elektroniki kunye oomatshini bokuvelisa bawa kakhulu.
Indlela abarhwebi abasabela ngayo kwi-115.80 yeedola kunye ne-115.56 yeedola ngaphambili ngoMvulo inokumisela isikhokelo sekhontrakthi yekamva elikrwada lika-Agasti Brent.
Indawo enkulu yokugcina igesi yendalo yaseBritane iya kuphinda ivuleke kwisithuba seenyanga ukunceda ukunciphisa ingxaki yamandla, ngokwezicwangciso ezixoxwe noKwasi Kwarteng.
I-SNAP yaseNew York ibonelela ngoncedo lokuthenga ukutya kubasebenzi abanemivuzo ephantsi, abantu abadala, kunye nabantu abakhubazekileyo. Izibonelelo zihlawulwa ngenyanga kwi-akhawunti ye-SNAP ehambelana nekhadi le-EBT, elinokuthi...
Ukwehla komsebenzi wefektri e-China kuye kwacotha ngoMeyi njengoko izithintelo ze-COVID-19 zaye zathotywa kwiindawo ezinkulu zokuvelisa, kodwa izithintelo zokuhamba zaqhubeka zinobunzima kwimfuno kunye nemveliso, iphakamisa inkxalabo malunga nokukhula koqoqosho kwikota yesibini. I-PMI) yenyuka yaya kwi-49.6 ngoMeyi ukusuka kwi-47.4 ngo-Ephreli, ibetha ukulindela kwe-48.6 kwi-poll yeReuters, i-Bureau yeSizwe ye-Statistics (NBS) yathi ngoLwesibili.Ukunciphisa iifektri zaseTshayina kuchaphazela imigca yokuvelisa kwezinye iindawo ezinkulu zoqoqosho e-Asia, kunye IJapan kunye neSouth Korea zombini zinika ingxelo yokwehla okubukhali kwimveliso.
Imisebenzi ethile esecaleni inokongeza amakhulu ambalwa eedola ngenyanga kumvuzo wakho, okanye ungasebenza kwimisebenzi engaziwayo kangako enokwenza ukuya kuthi ga kwi-1,000 yeedola (okanye ngaphezulu) ngenyanga.Bona: 22 side…
Emva kokuhlala ngaphantsi kwelo nqaku ixesha elide leveki, i-ether idibene ngaphezu kwe-10% kwiiyure ze-24 ukubetha i-$ 2,000 e-Asia ngoLwesibini ekuseni.I-Ethereum ithengisa nge-$ 1,985 ngexesha lokushicilela.Bona inqaku elihambelanayo: I-Bitcoin, i-Ethereum, i-Crypto kwi-Lows in Iinyani zowama-2022 ezikhawulezayo I-Crypto yesibini enkulu kwihlabathi yehla ukuya kwi-Lows yeedola ezili-1,721 […]
Ixesha lokuposa: May-31-2022